နှာခေါင်းမှုန်ရေမွှားစွဲခြင်းမှခံစားနေရပါသလား။ အဆင့် ၁: Afrin ကိုချပါ - မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း | ဇွန်လ 2022
ရပ်ရွာ၊ ကျန်းမာရေးပညာရေး ဆေးပညာသတင်း, ကျန်းမာရေးပညာရေး ကုန်ပစ္စည်း ကျန်းမာရေး ကျန်းမာရေး ဆီးဂိမ်း မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း, သတင်း ပြင်းထန်သောအားကစား အိမ်မွေးတိရိစ္ဆန် နှိပ်ပါ ဖျော်ဖြေရေး ကနျြးမာရေးပညာရေး, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း ကုမ္ပဏီသတင်း
အဓိက >> မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း >> နှာခေါင်းမှုန်ရေမွှားစွဲခြင်းမှခံစားနေရပါသလား။ အဆင့် ၁: Afrin ကိုချပါ
အကယ်၍ သင်သည်ရာသီအလိုက်ဓာတ်မတည့်ခြင်းသို့မဟုတ်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအထက်ကူးစက်မှုတစ်ခုခံစားနေရပါကသင်၏မိတ်ဆွေများကသင့်အားအန္တရာယ်များအကြောင်းသတိပေးလိမ့်မည်Afrinစွဲ။ သင်တစ်ချိန်ကအသုံးပြုခဲ့ပါကသင်၏ခန္ဓာကိုယ်သည်၎င်းကိုမှီခိုလာလိမ့်မည်ဟုသူတို့ပြောကြသည်။ ဒါကြောင့်ပုံမှန်သဘော, သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်စွဲစဉ်းစားမရင့်နေစဉ် လုပ်နိုင် မူးယစ်ဆေးအပေါ်မှီခိုဖြစ်လာသည်။ ဆရာ ၀ န်များကဤဖြစ်စဉ်ကိုပြန်ကောင်းလာစေရန်ပြန်လည်ခေါ်ယူသည် rhinitis ဆေး ပြီးတော့ဒါကတကယ့်ပြproblemနာပါ။ တကယ်တော့၎င်းသည်ဓာတ်မတည့်သူများနှင့် ENT ဆရာဝန်များထံလာရောက်လည်ပတ်မှု၏ ၉% အထိတာ ၀ န်ရှိသည်။
Afrin (oxymetazoline) သည်တစ်ခါတစ်ရံနှာခေါင်းနှင့်အကှေးဖိအားကိုသက်သာစေရန်နှာခေါင်းဖြန်းဆေးကိုရေဖြန်းသည်။ အအေးမိခြင်းနှင့်တုပ်ကွေးရာသီစတင်သည်နှင့်အမျှသင်သည်ဤ OTC ဆေးကိုအသုံးပြုရန်ပိုဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်သင်မကြာခဏအသုံးပြုခြင်း၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသတိထားသင့်ပါတယ်။
ပိတ်ဆို့မှုကို 101 ပြန်ခုန်ထွက်
နှာခေါင်းမှုန်ရေမွှားစွဲသည်မည်သို့ဖြစ်ပျက်နေသည်ကိုနားလည်ရန်သင်၏နှာခေါင်းခန္ဓာဗေဒကိုအမြန်ကြည့်ရှုကြပါစို့။ ဒေါက်တာ Duane Gels, MD, နှင့်အတူမတည့်အဆိုအရ Annapolis ဓါတ်မတည့်ခြင်းနှင့်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ မေရီလန်းတွင်သင်၏အထက်လေကြောင်းသည်တိုးချဲ့။ ကျုံ့သွားသည်။
တစ် ဦး ရာဇဝတ်မှုမြင်ကွင်းတစ်ခုနှင့်တူသောနှာခေါင်းရှိခဲ့သူမည်သူမဆိုသက်သေပြနိုင်ပါတယ်အဖြစ်နှာခေါင်း, သွေးကြောများနှင့်ပြည့်လျက်ရှိသည်, ဒေါက်တာ Gels ကပြောပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အနေအထားသည်ရပ်တည်ခြင်းမှထိုင်ခြင်းသို့လဲလျောင်းသွားသည်နှင့်အမျှသွေး၏အလေးချိန်ပြောင်းလဲသွားသည်။ သင်၏ရာထူးကိုပြောင်းသောအခါသင်၏နှာခေါင်းကိုပိတ်ဆို့ခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။
Adrenaline သည်သင်၏နှာခေါင်းထဲသို့သွေးစီးဆင်းမှုကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ ဒိုင်နိုဆောက Gren ကရှင်းပြသည်မှာတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုသို့မဟုတ်လေယာဉ်မှူးတုန့်ပြန်စဉ်အတွင်းသွေးထဲသို့ထုတ်လွှတ်လိုက်သော adrenaline (သားကောင်ပျောက်ကွယ်ရန်ထွက်ပြေးခြင်းကဲ့သို့) သည်နှာခေါင်းရှိ receptors များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။
သူကရှင်းပြသည်မှာ oxymetazoline (တက်ကြွသည့် Afrin ပါဝင်ပစ္စည်း) သည်သင်၏နှာခေါင်းတွင် adrenaline ကိုတုပပြီးအမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏နှာခေါင်းတစ်ရှူးများမှသွေးကိုထုတ်ယူခြင်းဖြင့်သင်၏နှာခေါင်းကိုဖွင့်စေသည်။ သင့်ရဲ့နှာခေါင်းထဲကို Afrin နှာခေါင်းမှုန်ရေမွှားတစ်ချောင်းကိုသင်ပက်ဖြန်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီဆိုးရွားလှတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှချက်ချင်းသက်သာသွားမှာပါ။ ကံမကောင်းစွာပဲ၊
သင့်နှာခေါင်းထဲမှသွေးယိုစီးသည့်အခါသွေးနှင့်အတူပါလာသည့်အောက်စီဂျင်နှင့်အာဟာရများကိုလည်းသောက်ပါ။ သင်၏နှာခေါင်းတစ်ရှူးများသည်ဤအရာများကိုလိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့် Afrin ပျက်သွားသည်နှင့်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်သည်သင့်နှာခေါင်းထဲသို့သွေးဆွဲခြင်းအားဖြင့်ပိုမိုများပြားသည်။
RELATED - Afrin ဆိုတာဘာလဲ။
မိသားစုဆေးပညာအထူးပြုမူလတန်းစောင့်ရှောက်မှုပေးသူဒေါက်တာဆူဆန်ဘက်ဆာကဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးဘက်ဆိုင်ရာပံ့ပိုးပေးသူဒေါက်တာဆူစန်ဘက်ဆာကပြောကြားသည်မှာဆေးယဉ်ပါးသောနှာခေါင်းမှုန်ရေမွှားများကျဆင်းလာခြင်းကြောင့်ပြန်လည်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြန်နှိုးဆွမှုသည်နှာခေါင်းပိတ်ဆို့မှုကိုတိုးပွားစေသည်။ ကရုဏာကိုယ်ရေးကိုယ်တာသမားများ Baltimore မှာ။ ထို့ကြောင့်လူနာသည်အမြဲတမ်းရေအခက်အခဲကိုတိုက်ဖျက်ရန်ရေမှုန်ရေမွှားကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်ကိုအမြဲတမ်းခံစားရသည်။ အကျိုးဆက်အားဖြင့်၎င်းသည်ရောဂါလက္ခဏာများကိုထိန်းချုပ်ရန်ဆေးအပေါ်မှီခိုနေရသည်။
တနည်းအားဖြင့်ဒါဟာသံသရာဖြစ်လာသည်။ ရက်အနည်းငယ်အသုံးပြုပြီးနောက်နှာခေါင်းမှုန်ရေမွှားသည်သင်၏တိုတောင်းသောအချိန်ကာလနှင့်တိုတောင်းသောအချိန်ကာလများအတွက်သင်၏နှာခေါင်းမှုန်ရေမွှားကိုသက်သာစေပြီးပြန်လည်ကောင်းမွန်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်စေသည်။ The ပိတ်ဆို့မှုကိုပြန်ခုန်ထွက် အလွန်ဆိုးရွားသွားသောကြောင့်နောက်ဆုံးတွင် Afrin သည်သင်၏လေကြောင်းခရီးကိုလုံးဝမရှင်းလင်းနိုင်ပါ။ အဆိုပါပြforနာကိုနှစ်ပေါင်းများစွာပေါ်နိုင်ပါတယ်။
သက်ဆိုင်သော: Flonase vs. Afrin
ဒေါက်တာ Besser မှ Afrin ဆေးစွဲခြင်းကိုသံသယဖြစ်စေသည့်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာအအေးကြက်ဆင်ဆေးကိုမသောက်ရန်ဖြစ်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြန်လည်ကျန်းမာလာပြီးရက်အနည်းငယ်အတွင်းစိတ်ဆင်းရဲစရာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သူမကပြောပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြန်လည်နာလန်ထူလာချိန်တွင်ရောဂါလက္ခဏာများကိုတားဆီးရန်နှာခေါင်း steroid (ဥပမာ Flonase) ကိုသုံးနိုင်သည်။ ပြင်းထန်သောဖြစ်ရပ်များတွင်ပါးစပ်ဖြင့် steroid ဆေးကိုညွန်ကြားနိုင်သည်။
ဒေါက်တာ Gels ကဆားဆားမှုန်ရေမွှားသည်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုလျှော့ချရန်ကူညီနိုင်သည်ဟုထပ်မံပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့အပြင် pseudoephedrine သို့မဟုတ် phenylephrine tablet များကဲ့သို့သောပါးစပ်ဖြင့်ဆေးကြောဆေးသည်ပြန်လည်ခုန်ထွက်နိုင်သည့်ခြိမ်းခြောက်မှုမရှိပဲ decongestant ပြုလုပ်နိုင်သည်ဟုသူကဆိုသည်။
သင်သာ Afrin မှုန်ရေမွှားအလုပ်လုပ်လိမ့်မည်ဟုသင်ခံစားရပါကဒေါက်တာ Besser က၎င်းသည်တစ်ရက်သို့မဟုတ်နှစ်ရက်အဆင်ပြေစေသည်။ ငါ ENT ဆရာဝန်များကအရမ်းကန့်သတ်အသုံးပြုမှုအတွက်အကြံပြုသည်ကိုမြင်ရပြီသူမကပြောပါတယ်။ သို့သော်လည်းငါသည်ပထမ ဦး ဆုံးအဘို့ရောက်ရှိအကြံပြုမဟုတ်ဘူး; Afrin မတိုင်မီကအခြားအစီအမံများကိုသုံးပါ။
တစ် ဦး မှီခိုဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းနှာခေါင်းပိတ်ဆို့မှုများအတွက်အခြားကုသမှုရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်။
အကယ်၍ ပြallနာသည်ဓါတ်မတည့်လျှင်၊ Flonase နှင့် Nasacort ၂) ရက်အကြာမှာဓာတ်မတည့်မှုရောင်ရမ်းခြင်းကိုလျှော့ချပါလို့ဒေါက်တာဂျယ်လ်ကဆိုပါတယ်။ ဤသည်ကောင်တာကျော်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဆေးညွှန်း စင်ကာပူ နှာခေါင်းပိတ်ဆို့မှုကိုလည်းတိုးတက်စေနိုင်သည်။
ပြန်ခန့်ထားခြင်းသည်သင်နှစ်ပေါင်းများစွာအသက်ရှူကျပ်စေသည့်အံ့ problem စရာကောင်းသည့်ဘုံပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဓာတ်မတည့်ခြင်းသို့မဟုတ်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအထက်ကူးစက်မှုတစ်ခုခံစားနေရပါက၊ သင့်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကိုမသက်မသာဖြစ်စေမည့် decongestant ရွေးချယ်စရာများအကြောင်းကိုသင်၏ဆရာဝန်နှင့်ပြောဆိုပါ။
RELATED: Flonase ဆိုတာဘာလဲ။ | Nasacort ကဘာလဲ? | Singulair ကဘာလဲ?
Restoril vs. Ambien: ကွဲပြားခြားနားမှုများ၊ တူညီခြင်းနှင့်သင့်အတွက်ပိုကောင်းသည်
ကလေးတစ်ယောက် Advil မီလီဂရမ်ဘယ်လောက်စားနိုင်သလဲ